Umthetho woBumbano obunjalo kwiKhemistry
Umthetho woBumbe obunjalo - iKhemistry Inkcazo
Ukuqonda uMthetho woBumbano obunjalo (uMthetho weMilinganiselo engapheliyo)
Umthetho woBumbano oluQhotywayo Inkcazo
Umthetho wokubunjwa okuqhubekayo ngumthetho wekhemistry othi ama-sampuli yequmrhu elimsulwa lihlala liqulethe izinto ezifanayo kumlinganiselo olinganayo. Lo mthetho, kunye nomthetho weendlela ezininzi, isiseko se stoichiometry kwikhemistry.
Ngamanye amagama, kungakhathaliseki ukuba iifom efunyenwe okanye ilungiselelwe, iya kuhlala iqulethe izinto ezifanayo kwinqanaba elifanayo.
Ngokomzekelo, i-carbon dioxide (CO 2 ) isoloko iqukethe ikhabhoni kunye ne-oksijini kwisilinganiselo somlinganiselo we-3: 8. Amanzi (H 2 O) ihlala iqukethe i-hydrogen kunye ne-oksijeni kwi-1: 9 ubukhulu bomlinganiselo.
Eyaziwa ngokuba: uMthetho weMilinganiselo engapheliyo , uMthetho woBunjwa obungapheliyo, okanye uMthetho kaProust
Umthetho weNkcazo yoBumbano obunjalo
Ukufunyaniswa kwalo myalelo kuthiwa umkhandi weFrench uJoseph Proust . Waqhuba uchungechunge lweemvavanyo ukususela ngo-1798 ukuya ku-1804 okwamkhokelela ekubeni akholelwe iimveliso zamakhemikhali ezibandakanya udidi oluthile. Gcinani engqondweni, ngeli xesha uninzi lweengcali zicinga ukuba izinto zidibanisa nayiphi na inxenye, kunye ne-Dalton ye-atomic theory yayisanda kuqalisa ukucacisa nganye into eyenza i-atom enye.
Umthetho woMzekelo wokuBumba woNyaka
Xa usebenza iingxaki zekhemist usebenzisa lo mthetho, umgomo wakho kukujonga umlinganiselo osondelene kakhulu phakathi kwezinto. Kulungile ukuba ipesenteji ikhulu embalwa! Ukuba usebenzisa idatha yokulinga, ukuhluka kuya kuba kunkulu.
Ngokomzekelo, masithi ufuna ukubonisa, usebenzisa umgaqo wokwakheka rhoqo ukuba iisampulu ezimbini ze-cupric oxide zihlala ngumthetho. Isampula yokuqala yayiyi-1.375 g ye-cupric oxide, eyayifudumala nge-hydrogen ukuvelisa i-1.098 g yobhedu. Kwisampuli yesibini, i-1.179 g yobhedu yachithwa kwi-asidi ye-nitric ukwenzela ukuvelisa i-nitrate yethusi, yatshiswa ukuze ivelise i-1.476 g ye-cupric oxide.
Ukuze usebenze le ngxaki, kufuneka ufumane ipesenti yepesenti nganye kwisalathisi ngasinye. Akunandaba nokuba ukhetha ukufumana ipesenti zobhedu okanye i-oxygen. Uza kususa ixabiso elilodwa ukusuka kwi-100 ukufumana ipesenti yenye into.
Bhala into oyaziyo:
Kwi sampula yokuqala:
ubhedu oxide = 1.375 g
ubhedu = 1.098 g
oksijini = 1.375 - 1.098 = 0.277 g
iipesenti ze-oksijini kwi-CuO = (0.277) (100%) / 1.375 = 20.15%
ubhedu = 1.179 g
ithusi ye-copper oxide = 1.476 g
oksijini = 1.476 - 1.179 = 0.297 g
iipesenti ze-oksijini ku-CuO = (0.297) (100%) / 1.476 = 20.12%
Iisampuli zilandelelana nomthetho wokubunjwa rhoqo, ukuvumela amanani amaninzi kunye nephutha lokulinga.
Ukungaxhomeki kuMthetho woBunjalo obunjalo
Njengoko kuvela, kukho ukungafani kulo mgaqo. Imimandla engekho-stoichiometric ekhoyo ebonisa ukubunjwa okungafaniyo ukusuka kwesampuli kwenye. Umzekelo wustite, uhlobo lwe-oxide yensimbi engenakho u-0.83 ukuya kwi-0.95 isinyithi nganye nge-oxygen nganye.
Kwakhona, kuba kukho i-isotop ehlukeneyo yee-atom, nokuba i-stoichiometric eqhelekileyo ingabonisa ukuhluka kobuninzi bomhlaba, kuxhomekeka ukuba yiyiphi i-isotope yama-athomu. Ngokuqhelekileyo, lo mmahluko uncinci, kodwa ukhona kwaye unokubaluleka.
Inani elincinci lamanzi amaninzi xa kuthelekiswa namanzi aqhelekileyo ngumzekelo.
Ukuhlawula ngokuqhelekileyo Inkcazo kwiKhemistry
Inkcazo Inkcazo kwiKhemistry kunye nezinye iiNzululwazi
Definition Solid Definition
UMthetho woNyaka ochaziweyo kwiKhemistry
I-Polar Molecule Inkcazo kunye nemizekelo
Zingama-4 amaCawa angamaKristu axolelwe ubuhlanga kwiCawa
Ibhokhwe elidala elineminyaka eli-14 okanye elibethelwa nguTata?
Iintsingiselo, Imvelaphi, kunye Nemisebenzi YesiXhosa
Izinyathelo ezi-7 zokufumana ngokwaneleyo Ukulala kwiKholeji
Ummandla oMfihlayo weeNveli zeBret Easton Ellis
I-5 Edeest Filibusters kwimbali yase-US
Indlela yokuchonga iMithi yaseMntla yaseMerika
Zingaphi Amazwe Abelana Amagama Abo Ngomlambo?
22 Iingambuzane eziqhelekileyo eziyingozi kwiMithi
Ziyindleko Kangakanani ukunyuka kweChilemanjaro?
Imveliso yokuzalwa yaseTshayina yeeNtsana
UKumkanikazi uVictoria Dies
IsiNgesi esiSiseko esiSisiseko samaZiko oLwimi olu-1 - Iisenzi eziSeko, iziPhulo, iiNqaku, njl